Usama Bin laden Oo Ka soo muuqday Xulka Qaranka Peru(xagee ayaad ku ogeed) | Xaqiiqonews
Usama Bin laden Oo Ka soo muuqday Xulka Qaranka Peru(xagee ayaad ku ogeed)
Magaca laacibka U ciyaara Xulka qaranka Peru ayaa soo jiitay indhaha saaxafadda ka dib markii uu ka soo muuqday xulka qarankiisa isaga oo aanan 15-ka sano u buuxsamin.
Magac isku egaanshaha aadka ah ee ninkani uu la wadaago Sheikh Usama Bin laden hogaamiyihii hore ee urur Weynaha Al-qaacidda ayaa ah arinka sida aadka ah ay warbaahintu u buun buuniyeen.
jariidada Ingiriiska laga leeyahay ee “the sun” ayaa qortay in usaama bin laden uu u ciyaari doono xulka wadanka Peru isaga oo da,diisu aysan ka badneen 15 sano, waxaa uuna canugani dhashay ka dib dhacdadii 11-September(qaraxintii daaraha mataanaha).
Lama oga sababta uu aabaha ugu bixiyey cunugiisa magacan balse sida ay qortay jariidada in caruurta loo bixiyo magacyada dadka caanka ah ayaa arin Ku badan Wadamada Latin America.
Usama Bin laden ayaa hadda u ciyaara naadiga Union Comercio waxaana loo doortay hadda in uu u ciyaaro xulkiisa isaga oo ku jira sanadkii koowaad ee waayihiisa ciyaaraha.
Magaciisa oo buuxa waa Osama bin Laden Jimenez Lopez, magaciisa darteed waxa uu soo jiitay indhaha dadka la nool iyo ardayda ay isku iskoolka ahaayeen hase ahaatee mar uu wareysi siiyey jariidada the sun ayuu yiri” Waxaan u arkaa arintani mid Adag laakin hadda wan la qabsaday hadda nolasheyda waa caadi, aabahey waan weydiiyey maxaa magacan iigu bixisay balse mar walbo waxaan arkaa in uu ka meermeeraayo in uu ka hadlo arimahan”